Date My Pet » 5 Dog Friendly Ideas For A Date First
Kana pfungwa musi wokutanga yakazara refu, kusagadzikana kumbomira uye kukurukurirana kuti kumisa vasati vatanga haasi kukufadza, zvino funga tichironga zuva rokutanga rinosanganisira imbwa yenyu uye musi wako. Kuunza imbwa yenyu inogona kuchengeta netsa Anonyaradza panguva Bay uye akupe ane mukati Kutarira unhu enyu. Asi unofanira kuenda kupi? Funga izvi shanu imbwa-ushamwari dating pfungwa.
Azodya kuresitorendi imbwa-ushamwari: Ichitora chisvusvuro kuresitorendi riri tsime-Worn pfungwa zuva rokutanga. Saka wadii kuwedzera monyorora kuti kuburikidza achidya kuresitorendi imbwa-ushamwari? Kuti tiwane imbwa-ushamwari resitorendi kwaunogara, kushandisa kwenyu kufarira kutsvaga injini kana kukumbira kwenyu kufarira imbwa Boutique zvakachengeterwa mazano.
Kuzopinda Outdoor konzati: Kana zviri kutamba tamba nebutiro bhendi ridzai Hits akakurumbira zvisungo kana tichiteerera kamuri kwaya kuridza dzenhoroondo mumhanzi, nokupinda panze konzati musi wokutanga mukuru nzira kusanganisira imbwa yako. kana zvichiita, kuunza kupikiniki mudengu uye inosanganisira vamwe imbwa-ushamwari tsauri, wo. Just nechokwadi kubhendi vakatozodzokera achibvumira imbwa; haudi kusvika pamwe pooches zvenyu chete kuti uzive havagoni kupinda.
Ongorora guta renyu netsoka: Kana mamiriro okunze akanaka chinofadza, ipapo funga uchisangana pamwe dzembwa dzako pane akakurumbira munhoroondo uye kusora nzvimbo. Kufamba ari dzakadekara nzira yokuziva mumwe ukuwo kupa imbwa yenyu muviri wavo. Regai kukanganwa poop mumasaga!
PaDzimba imbwa paki: Nokuti akangoverengawo uye nokukurumidza pakutanga musi, dzinoti uchisangana dzembwa dzako panguva yomunharaunda imbwa Park. Iwe imbwa yenyu inogona kuwana muviri apo kutamba bhora hove. Kuonana panguva imbwa Park anochengeta zuva ndagadzikana, wo; kana iwe rova ​​rugure, unogona hunoratidza vakananga nokuti chisvusvuro, asi kana pezvitsiga kuita chaizvo kwete kubhururuka, unogona chete achatungamirira musha. Ramba mvura yomumabhodhoro paruoko iwe imbwa yako, uye zvichida zvimwe tsauri nokuda dzembwa dzako. Usati anobatirira kuti leash, Zvisinei, kutanga vaongorora kuti aone kana imbwa Park kunoda rinokosha rezinesi kana Tag, kana kana unofanira kubhadhara muripo pachine.
Vapinde imbwa kiriniki: Kana chinhu kirasi mazano pamusoro nokushambidzika kana gym kirasi neimbwa wako, kupinda imbwa-yakataura kiriniki chete zuva wenyu nzira huru kuziva rimwe akadekara uye vakasununguka ezvinhu. Kuti tiwane imbwa kiriniki munharaunda yenyu, unogona kutanga vachiongorora yomunharaunda yako mhuka pokugara kana zvaanonyatsogona imbwa chitoro.
Pakuronga musi yokutanga iyoyo chaiyo munhu uye imbwa dzavo, nechokwadi vanonzwa vakasununguka vachiuya canine yavo pamwe. Vamwe imbwa kungasava chinofadza mune mapoka kana nevamwe nembwa.